Inona no resahin'ireo miresaka momba ny famerana ny Internet? | Avy amin'ny Linux
Inona no resahin'ireo miresaka momba ny famerana ny Internet?
Charlie-Brown | | hafa
Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, lahatsoratra roa navoaka tao amin'ity tranonkala ity, Uno androany avy amin'ny mpiara-miasa elav sy hafa ny ahy ny zoma lasa teo, dia nanangana andian-hevitra momba ny olan'ny famerana ny Internet sy ireo tombontsoa ao ambadik'izany. Novakiako tamim-pitandremana ireo fanehoan-kevitra ary niditra an-tsehatra tamin'ny fifanakalozana sasantsasany aho, fa amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia mijanona amin'ny fiheverana aho fa tsy fantatra marina izay kasain'izy ireo hifehezana ", miaraka amin'ny tanjona hanazavana ity olana ity dia ity lahatsoratra ity.
Amin'ny maha-santionana ahy dia tsy hampiditra afa-tsy ireo tolo-kevitra 3 izay manan-danja indrindra amiko aho noho ny lanjan'izy ireo sy ny mety ho vokany.
1- Ny tambajotra, ny ISP na ny mpamokatra atiny dia mandoa ny fivezivezena izay antsoina hoe "saram-pamaranana" ary tsy inona izany fa ny hetra manohana ireo orinasam-pifandraisan-davitra izay manana ny ISP. YA mandoa izy ireo.
2- Ny governemanta dia manapa-kevitra ny amin'ny fomba sy ny làlan'ny fivezivezena amin'ny Internet, izay mandraka ankehitriny dia mandeha ho azy, mitady ny lalana fohy indrindra (na haingana indrindra) amin'ny alàlan'ny tamba-jotra zaraina ankehitriny.
3- Ny fampahalalana sasany dia azo antsoina hoe "maloto fitondran-tena", "manafintohina", "mifanohitra amin'ny tombotsoan'ny ...", "manimba ny filaminan'ny ...", sy ny maro hafa izay milaza fa tokony esorina izany avy amin'ny tambajotra.
Iza no ao aorian'izay ary inona no mahaliana azy ireo
1- Nampiroboroboan'ny orinasam-pifandraisan-davitra, izay nahita ny fihenan'ny tombony azony noho ny fihenan'ny antso an-tariby an-telefaona tamin'ny fampiasana fitaovana toa ny Skype, sns izay "mamadika" antso ho fifamoivoizana data. Raha vao jerena dia toa manimba ireo mpamokatra votoaty lehibe toy ny oniversite, sns, na ireo mpanome tolotra lehibe, toa ny Google, sns, ny fankatoavany, saingy tadidio fa ao amin'ny tranonkala 2.0 isika izay rehetra mpamokatra votoaty mety ho izy isika ary, na izany na tsy izany, ny vola dia hiafara amin'ny fivoahana avy any am-paosintsika, na amin'ny fomba hafa na amin'ny fomba hafa, ho fanampin'ny fahaverezan'ny fidirana amina votoaty marobe.
2- Raha ny fahitana ara-teknika azy dia midika izany fa hitsahatra tsy hitantana ny tambajotra intsony izy eo ambanin'ny masonkarena ara-teknika ny fahombiazana sy ny fahamendrehana ho tantanan'ny kritika ara-barotra na ara-politika; ny fivezivezena dia hoentina amin'ny alàlan'ny iray izay manome ny vidiny tsara indrindra na ny an'ny mpiara-dia amin'ny politikan'ny governemanta resahina. Ankoatry ny fampidirana ny dinan'ny fifampiraharahana eo amin'ny governemanta sy ny tompon'ireo fotodrafitrasa mety hiteraka kolikoly be sy fifanarahana miafina, dia tsy ho afaka hisoroka ny "fitohanan'ny fifamoivoizana" intsony izany, satria ho very ny fahafahan'ny fonosam-baovao . mikaroha mandeha ho azy ny làlana tsara indrindra. Indray mandeha indray, ireo nampijaliana dia ny mpampiasa rehetra, voaheloka hiaritra fiandrasana ela kokoa noho ireo tamin'ny vanim-potoana modem niova.
3- Tena ilaina ve ny manazava an'io? Eny, okay; fananganana tsotra ny sivana ho iray amin'ireo fototry ny internet. Amin'izao fotoana izao dia misy ny sivana, saingy ampiharina amin'ny ankapobeny ny governemanta, manery ny ISP an'ny fireneny amin'ny alàlan'ny sivana sy / na sakana, raha tsy izany dia esorin'izy ireo ny fahazoan-dàlana hiasa aminy, raha tsy eo am-pelatanany ireo ISP. Ankoatr'izay, ny masonkarena REHETRA voalaza ao amin'ny hoe "labels" dia subjectif tanteraka, antony vao mainka mandà izany. Inona no fahasimbana ho an'ny mpampiasa, aleoko tsy lazaina azy ireo, antenaiko fa amin'ny maha-olona tia fahalalahana (tsy ny an'ny kaody) ihany, dia haintsika ny mankasitraka azy.
Maninona aho no manohitra
Raha hametraka azy amin'ny fehezanteny tokana, satria raha omena ireo tolo-kevitra sy izay holazain'izy ireo, amin'ny tranga rehetra, ny "fanafody" dia ratsy kokoa noho ilay "aretina".
Manomboka mifanakalo hevitra amin'ity fotoana ity raha maimaim-poana ny tambajotra na tsia anio tsy ny zava-dehibe indrindra; Toy ny miady hevitra momba ny lokon'ny saka io raha ny tiantsika rehetra dia ny mihaza totozy.
Ary ahoana ny amin'ireo "mpiara-dia tsy mahazo aina"?
Zava-mahaliana ity, ny ankamaroan'ny tsikeran'ireo mpitsikera dia mifototra amin'ny tsy fahatokisana ireo izay manohitra ny lalàna mifehy, tsy noho ny tolo-kevitr'izy ireo na ny antony manohitra azy io, fa satria avy amina orinasa na governemanta sasany. Amiko, ny fahitana fihetsika toy izany dia liana ary heveriko ho valin'ny fanehoan-kevitra voalohany sy ara-pihetseham-po noho ny fanjohian-kevitra voaisa mifototra amin'ny fampahalalana, saingy hey, ao anatin'ny zon'izy ireo izy ireo, na dia tsy mifanaraka amin'izy ireo aza. Aleoko misaina toy izay manana "faharesen-dahatra"; Raha rahampitso ny RIAA sy ny SGAE dia nanomboka fampielezankevitra manohitra ny lalàna mifehy ny Internet mifototra amin'ny fandavana ireo tolo-kevitra voalaza etsy ambony, dia miankina amin'ny vatoko izany, satria izy ireo no manohana ny fitakiako fa tsy ny azy ireo.
Amin'ity ady ity dia raisina an-tanan-droa ireo mpiray dina, avy amin'ny "ray" mpahay siansa iray toa an'i Vinton Cerf, goavambe Internet toa an'i Google, hatrany amin'ny mpampiasa Internet farany sy be indrindra na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, satria miankina amin'ny fiarovana ny Internet soroky ny tsirairay.
Manantena aho fa tsy ela loatra ary antenaina ny mpanoratra malaza Haruki murakami Miala tsiny aho noho ny famaritako ny lohatenin'i una amin'ireo tantara nosoratany tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Inona no resahin'ireo miresaka momba ny famerana ny Internet?
28 hevitra, avelao ny anao
Nohazavaina tsara kokoa fa tsy azo atao. Tsy mampino ny fomba ahafahan'ny vondron'olona vitsivitsy (ireo izay mifehy voajanahary) mandray fanapahan-kevitra an-tapitrisany, amin'ny olona sy ny firenena iray manontolo. Ary ny ratsy indrindra dia mino an-kavanana izy ireo. ¬¬
Misaotra anao tamin'ny hevitrao, izay mamela ahy hanisy teboka izay tsy nampidiriko tao amin'ilay lahatsoratra.
Nandritra ny fihaonambe WICT teo ambany fiahian'ny ITU ho sandan'ny ONU, ankoatry ny governemanta mpikambana, 700 "fikambanana tsy miankina" mandray anjara, izay mpikambana ao amin'ny ITU ihany koa, fa TSY MISY amin'izy ireo misolo tena ny mpampiasa internet. Ny fahazoana ho mpikambana ao amin'ny fikambanana "demokratika" toy izany dia mitentina 2,100 $ ka hatramin'ny $ 35,000 USD isan-taona, miaraka amin'ny fahasosorana fa TSY "manan-jo hifidy ireo" mpikambana "ireo, mazàna dia fikambanana manana tombontsoa amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra izay andraisan'izy ireo anjara mavitrika. lobbying, ka raha liana ny hahazo fahefana bebe kokoa amin'ny fikambanana toy izao i Google, heveriko fa tsy ho sarotra amin'izy ireo ny mandoa ny saram-pandraisana mpikambana, sa tsy izany?
Speed ​​Cat dia hoy izy:
Hitako fa lahatsoratra tena tsara izy io ary tsy hoe fotsiny satria mieritreritra momba azy bebe kokoa na latsaka mitovy aminao aho.
Ny manala ahy kely ny sary dia ny lokon'ny saka, saingy azo antoka fa mora tohina izy io, mahatonga ahy hahita "fa ny farany dia manamarina ny fomba" izay tsy misy.
Te hahafantatra ny hevitrao momba ny vahaolana fanerena amin'ny governemanta, fikambanana koa aho ...? Izaho, amin'ny saka paranoida, dia nieritreritra efa ela fa tokony hanangana Internet ho antsika isika hanafaka ny tenantsika tanteraka. Tsikelikely, fa manomboka izao. Tamin'ny voalohany dia teo anelanelan'ny node teo akaiky teo izy io, toy ny efa fanaon'ny vondrona mpampiasa sasany, saingy tsy azo atao ve ny mametraka fikambanana / koperativa lehibe iray tsy hametrahana zanabolana amin'ny orbit na inona no fantatro
Valiny tamin'i Veloz Cat
Windóusico dia hoy izy:
Raha manangana ny Internet-nay manokana isika, araka ny hevitrao, handao antsika irery ve izy ireo? Mivoaka ny lalàna izay misy fiatraikany amin'ny tambajotra eo an-toerana, tsy afa-mandositra isika.
Mamaly an'i Windóusico
Ny tena sarotra indrindra dia ny manova ny toe-tsain'ny olona, ​​ary mbola ratsy kokoa aza ny an'ny mpanao politika sy ny governemanta, izay tsy dia mahatakatra ny fiantraikan'ny tambajotra amin'ny fiarahamonina, tsy amin'ny fiainan'ny olona ihany fa amin'ny fitomboan'ny harinkarena koa; saingy tsia, eo izy ireo «mampihomehy», mazava ho azy «amin'ny anarantsika sy manampy antsika» ...
Natahotra ahy ianao izao, tsy namaky momba ny saka paranoida ve ianao?
Tsy mila milaza afa-tsy ny ao an-trano isika.
Rehefa milaza ianao fa lalàna amin'ny tambajotra eo an-toerana dia midika hoe "tambajotra eo an-toerana" na "lalàna eo an-toerana amin'ny tambajotra tsy dia eo an-toerana"?
Any Espana ve ireo lalàna ireo? Avia, lazao aho tsia mba hahafahako manohy milamina amin'ny fihavanana.
HAHAHAHA ... Tsy nisy hita, fa ny "farany dia manamarina ny fomba" no toa ratsy indrindra tamiko, ka manome toky anao aho fa tsy fikasan'ny saka ohatra izany; izay mazava ho azy fa akaiky anao. 😉
Mikasika ny vahaolana, heveriko fa manontany ahy betsaka ianao, fa farafaharatsiny hanandrana aho. Ny fitazonana ny tsindry amin'ny governemanta sy ny fikambanana dia ilaina foana, na dia toa tsy asehon'izy ireo aza izany, satria raha ny tena izy dia DO, amin'ny tranga ratsy indrindra, manandrana mangina ny fihetsiketsehan'ireo izay milaza, na izany na tsy izany, Ary omena ny traikefa ny nipoiran'ny tamba-jotra ary nivelatra ary ny dikan'izany ho an'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny, raha toa ka mila miaro zavatra isika rehetra, dia mijanona ho afaka amin'ny fitsabahan'ny governemanta sy ny fikambanana izany, izay tsy ilaina na iza na iza (na miaraka amin'ny ny fikasana tsara indrindra) manandrana mifehy na mifehy azy, fa ny korontana voarindra no fanjakana tsara indrindra tratrarina ary izy irery ihany no manome antoka ny fivoarany maharitra.
Mikasika ny "fananganana" tambajotra hafa, tsy hitako ho azo atao izany, ary tsy heveriko fa hovahana amin'ny satelita na zavatra toa izany, tsy tambo isaina ny sandan'ny fotodrafitrasa misy ankehitriny (miresaka momba ny sandan'ny vola sy fitaovana ilaina), ary tsy fampiasam-bola mandritra ny iray andro, ankoatr'izay, dia ho toy ny manandrana mamorona kodiarana izany; efa misy io ary efa ela no mihodinkodina.
Misaotra betsaka anao noho ny hevitrao ary nijanona kely teo, hotahiriziko ao an-tsaina ianao mba tsy hilazanao resaka tsy mahafinaritra momba ny saka ...
Purr ny fahasambarana.
Rayonant dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao noho ny fanazavana, satria ny lahatsoratra sy ny hevitrao dia misy fahalalana sy tanjona tokoa.
Miombon-kevitra aminao aho, matetika ny olona dia resin'ny faharesen-dahatra sy ny fitsarana an-tendrony mba haneho hevitra fa tsy hanombatombana ny vaovao sy hamerina hijery izany mba hanomezana hevitra marim-pototra, amin'ity tranga manokana ity momba ny fanao Google sasany izay misy ny tsiambaratelo sy ny fifehezana ny vaovao , Azoko tsara fa misy ny fisalasalana fa ny tsy azo kianina dia ny fitadiavana tombontsoa ara-toekarena, orinasa mitovy amin'ny fomba itondrantsika ny asantsika izy. Fa ilaina ihany koa ny mahita fa marina ny adihevitra momba ny mpanohitra ary ny mety ho vokatr'izany dia ratsy lavitra noho ny zava-misy ankehitriny.
Mamaly an'i Rayonant
Jereo, rehefa henoko ny momba ny "firaisana tsikombakomba" misy an'i Google sy ny fikirakirany ny mombamomba ny mpampiasa, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaiko dia ny serivisy sy ny rindranasa rehetra novolavolain'i Google, avy amin'ny fandalinana ny vaovao voangona avy amin'ny mpampiasa azy, raha mbola etsy ankilany, tsy fantatro ny tranga iray izay nampiasàny izany vaovao izany tamin'ny mpampiasa; Raha misy tranga tena misy sy voarakitra an-tsoratra dia mangataha olona iray hanoro izany. Araka ny eritreritro fa efa nolazaiko teo aloha, ny olona ary mazava ho azy ireo andrim-panjakana (orinasa, fikambanana na governemanta) dia tokony refesina amin'ny valin'ny fihetsik'izy ireo fa tsy amin'ny zavatra lazainy na izay lazainy momba azy ireo ary averiko hatreto. ny hetsika Google dia tsara. Mikasika ny fanodikodinam-bola amin'ny fikatsahana tombony ara-toekarena dia fomba fanao efa ela teto amin'ny tanintsika izy io ary mila famakafakana antropolojika na psikolojia izay aleoko tsy manandrana.
Misaotra betsaka amin'ny hevitrao sy ny fijanonanao.
Marina, saingy misy foana ny mety hisian'ny governemanta hanery an'i Google hanome vaovao momba ny mpampiasa azy na hanova ny làlan'ny politikan'i Google ary manapa-kevitra ny hampiasa ny fampahalalana azony izy ireo amin'ny tanjona tsy dia tsara etika. Izy ireo dia efa noterena hanivana ny ampahany amin'ny serivisin'izy ireo noho ny tsindry avy amin'ny governemanta sy ireo vondron-kery. Noho izany antony izany dia heveriko fa tsy tsara ny mametraka ny mombamomba anao rehetra eny an-tanan'izy ireo ary ny serivisy fotsiny no ampiasainao. Efa nolazaiko foana fa tsy tsara ny miloka amin'ny zava-drehetra amin'ny karatra iray ny zava-drehetra.
Heveriko fa tsy ny devoly google. Ao anatin'ny ratsy dia izy ireo no tsara indrindra, saingy tsy anjely koa izy ireo ary tsara kokoa ny mitandrina raha sendra misy izany. Ary tsy ho an'ny google ihany io. Ny fitsipika mitovy amin'izany dia tsy maintsy arahana amin'ireo orinasa rehetra.
Eny, amin'izao fotoana izao, heveriko fa namaly tsara ny fanerena izy io, naneho izany rehefa nisintaka avy any Chine izy, mampalahelo fa tsy afaka nilaza izany momba ireo "lehibe" hafa izay tsy voatonona sy niara-niasa miaraka amin'ny governemanta toy izany. Ny mety hiovana azy (ho ratsy kokoa) dia misy foana, fa miankina amintsika ihany koa ny misoroka izany tsy hitranga. Miombon-kevitra aminao aho fa tsy afaka miloka amin'ny zava-drehetra amin'ny karatra tokana isika, raha ny marina, mampiasa serivisy samihafa aho isaky ny afaka manao izany.
Mikasika ny fanasokajiana ho "anjely" na "demonia", toa be loatra amin'ny anaram-boninahitra be mpividy indrindra izany, aleoko mieritreritra fa, toa ny zava-drehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia misy nuansa.
Heveriko fa diso ny fahazoako ahy, ny tiako holazaina dia hoe azoko fa misy ny fitsarana an-tendrony sy ny fisalasalana momba ny olona momba an'i Google, saingy tsy nisy fotoana noresahako ireo firaisana tsikombakomba na mitovy amin'izany, fa Google dia manana fampahalalana marobe momba antsika izay mampiasa ny serivisin'izy ireo? Eny, iza no mampiasa azy io hahazoana tombony? Angamba, manaiky ireo fepetra ireo izahay rehefa mampiasa ny serivisinao? Mazava ho azy fa marina izany, saingy izany indrindra no nanononanao azy io izay nanampy tamin'ny famoahana fahombiazana amin'ity karazana serivisy ity. Andao, tsy fantatro izay mety hitranga amin'ireo mailaka raha tsy misy Google, tadidiko ihany ireo mailaka 2 mb!
Tsia, milamina, azoko tsara ny hevitrao.Raha nolazaiko ny lohahevitry ny "firaisana tsikombakomba" dia tsy ny momba anao no resahiko fa ny "entin'ny faharesen-dahatra sy ny fitsarana an-tendrony" lazainao. Miombon-kevitra aminao aho amin'ny zavatra arosonao, ekenay rehetra ny fepetra fampiasan'ny serivisy Google sy ny sisa amin'ireo mpamatsy, raha tsy izany dia TSY azontsika atao ny mahazo ireo serivisy ireo, ka fomba iray na hafa no ekenay. Ho ahy manokana, rehefa tsy mifanaraka amin'ny fepetra fampiasana serivisy aho dia tsy ampiasaiko na ataoko farafaharatsiny mba hahatratrarako ny tanjoko, ohatra, nanao kaonty tao amin'ny Facebook aho mba hifidianana ao amin'ny Bitácora loka, fa tsy ampiasaiko amin'ny zavatra hafa na apetrako aminy ny mombamomba anao. Tsy milaza aho hoe izany no vahaolana tonga lafatra fa farafaharatsiny dia io no ampihariko hahomby.
Misaotra betsaka noho ny hevitra rehetra izay tena manazava.
Vondron-kevitry ny antoko Pir Pirate Party
Eny ary, misoratra anarana amiko amin'ity lalao ity fa efa manomana patch aho sy ilay boloky miaraka amiko noresahiko ... 😉
Ilay avy any Uruguay. Jereo raha misy antoko piraty any amin'ny firenenao, ary raha tsy mino an'izany ianao.
Ok, fa eto amin'ny toerana itoerako misy zavatra toa izao dia TSY MAINTSY, na «pirate» na «buccaneer» ... 🙁
Manaiky tanteraka anao.
Misaotra fa tsy maintsy satria mifanojo ny heny ... HAHAHAHAHA 😉
ho hitantsika ny niafaran'izany rehetra izany
Heveriko fa indrisy fa tsy araka ny fanirianay. Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao dia manome soso-kevitra aho lahatsoratra iray navoaka androany tao amin'ny Cnet izay manome fanazavana misimisy kokoa sy mamaly ireo fanontaniana mety hitranga momba ity raharaha ity, ity ny rohy:
Sady tsy mino no tsy mampiasa fahalalahana ny mpanao politika. Ny fahefana fotsiny no tadiavin'izy ireo ary heverina ho "fifehezana tanteraka".
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratrao. Toa tsy mampino fa mbola misy ny olona, ​​eo amin'ireo mpitia amin'ny Internet, izay tsy mazava momba an'izany rehetra izany. Andao hojerentsika raha mifoha isika ary mahavita tsy hanala antsika amin'ny fahalalahana kely sisa tavela.
Mino aho fa betsaka ny ezaka natao mba "fitoriana filazantsara" momba ny rindrambaiko maimaimpoana, saingy vitsy dia vitsy ny "mitory filazantsara" momba ny Fahafahana, miaraka amin'ny litera lehibe, ho fototra voalohany sy tena ilaina amin'ny fiainana.
Misaotra betsaka noho ny fanehoan-kevitrao ary nijanona teo.
Teuton dia hoy izy:
Izahay dia miresaka zavatra tsy voatonona anarana na dia ho antsika Kiobàna aza ... Internet ... maro rehefa maheno ity teny fikoropahana ity ... ny fiampangana izay ataon'ny olona isan'andro ho fifandirana handavana antsika ity fifandraisana ity, na dia 50 taona lasa izay aza misy Ankehitriny dia zava-dehibe amin'ny fampandrosoana olombelona eo amin'ny fiarahamonintsika izy io, ary ny tsy nilazan'izy ireo tamiko mihoatra ny hoe niaina ny raibeko nefa tsy nilaina, na angamba mandà ny hitsaboana antsika amin'ny penicillin rehefa tratran'ny aretina isika ... raha fintinina dia milaza fotsiny aho fa ny internet dia tsy zavatra hafa, satria tamin'ny taon-dasa raha tadidiko tsara dia ao amin'ny lisitry ny zon'olombelona io….
Mamaly an'i Teuton
Amin'ny fotoana iray dia tsy hanana safidy izy ireo, betsaka ny fanerena na aiza na aiza, ary terena izy ireo, raha tsy mino an'izany ianao dia jereo ny zava-nitranga tamin'ny olana momba ny dia, fa rehefa manao izany izy ireo dia hampihatra betsaka fameperana betsaka kokoa noho ireo voalaza ireo Fa manana mpanolotsaina tena tsara izy ireo; Tadidio fa ny fotodrafitrasa fifandraisan-davitra rehetra izao dia napetraka miaraka amin'ny Sinoa, miaraka amin'ny ekipan'izy ireo ary miaraka amin'ny torohevitr'izy ireo. Na izany na tsy izany dia miankina amintsika ny mandinika ny fameperana, toy ny ataontsika ankehitriny, rehefa TSY manana Internet isika. 😉
Eto Kiobà miresaka momba ny Internet dia utopia fotsiny.
Youtube manavao ny kinova ho an'ny iOS
Miaraka amin'ny terminal: Tantano Twitter na Identica amin'ny alàlan'ny Twidge